ဥူးသုစိတ္တ အဖအမည် = ဦးရိုဂန်ဒယား (အိန္ဒိယ ကုလယ်) အမိအမည် = ဒေါ်ခင်စော (ဘင်္ဂါလီ ရခိုင်) နေရပ်လိပ်စာ = လှိုင်သာယာ မီးခွက်ဈေးအနီးရှိ ကျူးရပ်ကွက် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဥူးသုစိတ္တ အဖအမည် = ဦးရိုဂန်ဒယား (အိန္ဒိယ ကုလယ်) အမိအမည် = ဒေါ်ခင်စော (ဘင်္ဂါလီ ရခိုင်) နေရပ်လိပ်စာ = လှိုင်သာယာ မီးခွက်ဈေးအနီးရှိ ကျူးရပ်ကွက်
ဥူးသုစိတ္တ အဖအမည် = ဦးရိုဂန်ဒယား (အိန္ဒိယ ကုလယ်) အမိအမည် = ဒေါ်ခင်စော (ဘင်္ဂါလီ ရခိုင်) နေရပ်လိပ်စာ = လှိုင်သာယာ မီးခွက်ဈေးအနီးရှိ ကျူးရပ်ကွက်
January 8, 2017 January 9, 2017 drkokogyi
Tin Ko Ko shared Tin Aye
ကျနော့ wall မှာ အပြည့်စုံတင်ပေးပါ့မယ်..#ဇစ်မြစ်အပိုင်း(၁)#
အမည် = ဥူးသုစိတ္တ
အဖအမည် = ဦးရိုဂန်ဒယား (အိန္ဒိယ ကုလယ်)
အမိအမည် = ဒေါ်ခင်စော (ဘင်္ဂါလီ ရခိုင်)
နေရပ်လိပ်စာ = လှိုင်သာယာ မီးခွက်ဈေးအနီးရှိ ကျူးရပ်ကွက်
အမျိုးသားရေး အမျိုးသားရေးဆိုပြီး အူလွန်းအားကြီးနေလို့ ဒီသကောင့်သားရဲ့ မျိုးရိုးဇစ်မြစ်ကလေးကို တစ်စလောက်ဆွဲထုတ်ပြလိုက်တာပါ ။ ဒီခွေးကုလားက ခွေးပါးဝနေတာကြာပြီလေ ။ ဒီခွေးသားတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် တရုတ်တွေ နဲ့ ကုလားတွေနဲ့စပ်ဖောက်ထားတဲ့ မျိုးမစစ်တွေချည်းပဲ ။
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်များနှောက်ယှက်သဖြင့် တမန်တော်နေ့အခမ်းအနား အကျဉ်းချုံးကျင်းပရ
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အား မငြိမ်းချမ်းသည့်တရားဟု ပုတ်ခတ်ခဲ့သည့် မျိုးချစ်ရဟန်းတော်များသမဂ္ဂမှ ဦးသုစိတ္တဦးဆောင်သည့် အပေါင်းအပါအချို့သည် ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ကကျင်းပသည့် မဟာတမန်တော်နေ့အခမ်းအနား ကိုထပ်မံကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် ပရိတ်သတ် ၅၀ ၀န်းကျင်ဖြင့်အခမ်းအနားကိုအကျဉ်းချုံးကျင်းပပေးခဲ့ရသည်။
တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကျင်းပသည့်တမန်တော်နေ့အခမ်းအနားကို ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ က၀င်ရောက်နှောက်ယှက်ခဲ့သဖြင့် အခမ်းအနားမှုလအစီအစဉ်များအစား အတိုချုံးကျင်းပခဲ့ရပြီး ဧည့်ပရိတ်သတ် ၅၀၀ စာအတွက် ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအသောက်များကိုလည်း အခြားလိုအပ်ချက်ရှိသူများထံလှုဒါန်းခဲ့ရကြောင်း အခမ်းအနားကျင်းပရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးက Myanmar Muslim Media သုို့ပြောသည်။
သာကေတမြို့နယ်တမန်တော်နေ့အခမ်းအနားကို အင်အားသုံးဖျက်သိမ်းစေခဲ့သည့် အမျိုးသားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်များကို “အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက တားဆီးတာလည်းမရှိဘူး ညှိုနှိုင်းပေးတာလည်းမရှိဘူး”ဟု ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဘုန်းကြီး ဦးသုစိတ္တက မီဒီယာများသုို့မိန့်ကြားသည်။
“ဓာတ်ဆီထပ်သွားယူ၊ဓာတ်ဆီထပ်သွားယူ ဒီမှာက နည်းနည်းပဲပါလာတယ် လို့ပြောနေသံလည်းကြားခဲ့ရတယ်”ဟု အထက်ပါအခမ်းအနားသို့ လာရောက်တားဆီးသည့် အမျိုးသားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်များ ပြောစကားကို ကြားခဲ့သူတစ်ဦးကပြောသည်။
`ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် လာတားတဲ့အဖွဲ့ကိုအရေးယူဖို့ မရှိဘူး။ သူတို့ကလည်း သူတို့ကြားထားသလိုမျိုး ဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေရှိနေမှာစိုးလို့ လာပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ပွဲထဲကို လူ့အချို့ပေးဝင်လိုက်တော့ ပြဿနာကပြီးဆုံးသွားတယ်။ သံဃာတွေကတော့ ပွဲခန်းမထဲကို ၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး´ဟု ရဲမှူးကိုကိုဦးက ပြောကြားကြောင်း Friday Journal ဖဘစာမျက်နှာတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
တမန်တော်နေ့ကျင်းပခြင်းကို အနှောက်အယှက်ပေးနေသည့် အမျိုးသားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သည့် မျိုးချစ်ရဟန်းတော်များသမဂ္ဂမှ ဦးသုစိတ္တသည် ကုရ်အာန်သည်မငြိမ်းချမ်းသည့် တရားဖြစ်ကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်နေ့တွင်ပြောကြားထားသူဖြစ်သည်။
ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်တွေဖြစ်တဲ့ အညာဒေသက ရွှေဗမာတွေပါးစပ်က အမျိုး ဘာညာ သာရကာဆိုပြီး အော်ဟစ်မီးမွှေးနေတဲ့ အသံကတော့ မရှိသလောက်ကိုရှားပါတယ်။
သာသနာကိုအမည်ဖျက်တဲ့ ဝီလဒူတို့မဘသအုပ်စုကိုတောင် ဝါဒဖြန့်ဖို့နေနေသာသာ တရားပွဲတောင်ကျင်းပခွင့်မပေးခဲ့တာ ရွှေဗမာစစ်စစ်တွေဆိုတာကို အားလုံးအသိပါ ..
ဒီလူယုတ်မာတွေက သာသနာကိုအမည်ခံ ဗမာလူမျိုးဆိုတဲ့အမည်ကိုခံပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အမည်ကို ဖျက်ဆီးပစ်နေတာ လယ်ပြင်မှာဆင်သွားနေသလို ထင်ရှားလွန်းလှပါတယ်ဗျာ ။
ကဲ့ ကျုပ်ဒဲ့ပဲ့ပြောမယ်ဗျာ အခုအမျိုးသားရေး လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေရဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေကို Public မှာ ချပြရဲလားလို့ မျိုးမစစ်တွေကိုမေးကြည့်လိုက်စမ်းပါ ။ ရဲလားလို့ !!!!!!!!!!!!!!!!
ဒီ့ထက် လူပါးဝလာဦးမည်ဆိုပါက ဇစ်မြစ် အပိုင်း ၂ အားဆက်လက်၍ ဖော်ပြရပါလိမ့်မည် ။
← အပြင်​မှာ လုံခြုံ​ရေး​ပေးတဲ့လူ​တွေမှ အများကြီး…
နိုင်ငံတော်အစိုးရ … ဘာလည်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ … ဘာလည်း ဗမာတပ်မတော် … ဘာလည်း →
2 thoughts on “ဥူးသုစိတ္တ အဖအမည် = ဦးရိုဂန်ဒယား (အိန္ဒိယ ကုလယ်) အမိအမည် = ဒေါ်ခင်စော (ဘင်္ဂါလီ ရခိုင်) နေရပ်လိပ်စာ = လှိုင်သာယာ မီးခွက်ဈေးအနီးရှိ ကျူးရပ်ကွက်”
*ဥပဒေ ဆိုတာကျင့်သုံးဖို့ကွ စာအုပ်ထဲထားဖို့မဟုတ်ဘူး*
၃၄၈။ နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး ၊ ဇာတိ ၊ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနန္တရ ၊အဆင့်အတန်း ၊ ယဉ်ကျေးမှု ၊ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ တို့ ကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားမှု မရှိစေရ။
၃၅၆။ နိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံသားများ၏ တရားဝင်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသော ရွှေ့ ပြောင်းနိုင် သောပစ္စည်း ၊ မရွှေ့ ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအရ ကာကွယ်ပေးရမည်။
၃၆၂။ နိုင်ငံတော်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသာသနာ ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာသာသနာ၊ဟိန္ဒူဘာသာသာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သောဘာသာတို့ ကို ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်သောနေ့ ၌ နိုင်ငံတော်တွင်ရှိကြသော ကိုးကွယ်ရာဘာသာများဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်။
၃၆၃။ နိုင်ငံတော်သည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာ သာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည်။
၃၆၄။ နိုင်ငံရေးကိစ္စအလို့ ငှာ ဘာသာသာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။ ထို့ ပြင် လူမျိုးရေးကြောင့်သော် လည်းကောင်း ဘာသာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း တဖက်နှင့်တစ်ဖက် ၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း ၊ ရန်မူခြင်း ၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းတစ်မျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်စေရန် အကြောင်းရှိသော အပြုအမှုသည် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့် ကျင်သည်။ ထိုအပြု အမူ မျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ 
စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)
Aung Myint Min added5new photos.
တမန်တော်အခမ်းအနားကို အခုလိုကားလေးစီးနဲ့ လူအင်အားအပြည့်လာရောက်အားပေးပြီး တမန်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အတွက် လှိုက်လှဲ ပျူ ငှာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။နောက်ပွဲတွေရှိရင်လည်း ဖိတ်လိုက်မယ်နော်။ အခုလိုမျိုး
လူစုံတက်စုံ ကား၎စီးထက်ပိုလာခဲ့ပြီး တရားနာ လှည့်ပါ။နောက်တစ်ခါ ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးခဲ့ရင် ကျနော်တို့က ထိုင်ခုံလေးတွေစီစဉ်ပေးမှာပေါ့ ။ဒီနေ့တော့ အားနာစရာကြီးဗျာ ။သင်္ဃန်းဝတ်ကြီးတွေနဲ့ အပြင်မှာ ထိုင်ခုံမရလို့ အော်ပြောနေရတယ်။